Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ရသအလင်းရယ်. ကတုံးရယ်.. အင်းသီးရယ်... ပြီးတော့ ကဖစရယ်... အင် ဒါ ဗြူး
ရသအလင်းရယ်. ကတုံးရယ်.. အင်းသီးရယ်... ပြီးတော့ ကဖစရယ်... အင် ဒါ ဗြူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၃ ရက်နေ့က တနိုင်ငံလုံး အုံ့အုံးကြွက်ကြွက် ဆူညံပွက်လော ရိုက်ပျော်နေခဲ့သလို စကာင်္ပူနိုင်ငံမှာလဲ အုံ့ ကြွက် ဆူညံ ပွက်လော ရိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက ရသအလင်း က ဦးဆောင်ပြီး စီစဉ်တဲ့ ပွဲကြောင့်ပါပဲ။ နတ်ကနားပွဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကတုံးပွဲပါ။ ကတုံးဆိုတာနဲ့ တန်းမြင်တာက ဇာဂနာမဟုတ်လား။ ကို ကတုံး(အဲလေ) ဇာဂနာကြီး စကာင်္ပူလာမယ် ဟောပြောပွဲ လုပ်မယ်။ နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာကြီး မင်းထင်ကိုကိုကြီးလဲ ပါမယ် ဆိုတော့ လူတွေက ပြူးပြူးပြဲပြဲ ကတုံး ပြောင် ( အပြောင်အပျက်ပြောခြင်း) တာ ကြည့်မလို့ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ ဆူညံပွက်လော ရိုက်ခဲ့တာပါပဲ။
ပြီးတော့ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပပေးတာက မြန်မာ ကဗျာနဲ့ စာပေကို မြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာ ညီအကို မောင်နှမများရဲ့  အားကြိုးမာန်တက် ရသမျှရှိစု မဲ့စုလေးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး မြန်မာပြည်က ငွေကြေးချို့တဲ့ပြီး မကျမ်းမာတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ထောက်ပံ့တဲ့ ရသအလင်းပါပဲ။ ဒီလို မြင့်မြတ်တဲ့ အလှူထဲမှာ ပါဝင်ချင်တဲ့ သူတွေက လက်မှတ်ဝယ်ပြီး အားပေးချင်တာ ကြောင့် စကာင်္ပူက ဆီးသီးတော မှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ရနံ့ သစ် ဆိုင်နဲ့ မြနန်းနွယ် ဆိုင်တွေမှာ တိုးမပေါက်အောင် ( တိုးစရာလဲ အပေါက်မရှိပါဘူး) စည်ကားနေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို တိုးမပေါက်အောင် လက်မှတ်တွေ ရောင်းကောင်းနေခဲ့တာလဲ လက်မှတ်ကောင်တာမှာ မျက်နှာချိုချိုနဲ့ ချစ်စရာကောင်းအောင် ပြောတတ်ဆိုတတ် ပေါင်းသင်းတတ်တဲ့ နာမည်ကျော် လူချော ဘလော့ဂါ ဖိုးစိန်ကြောင့်ပါပဲ။. ( အဟွတ်)
အဲဒါကြောင့်လဲ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် လတ်လတ် ကောင်မလေးတွေက ကြော်ငြာက ဇာဂနာကို ကြည့်လိုက်၊ ဖိုးစိန်ကို ငေးလိုက်၊ လက်မှတ်လေးဝယ်လိုက်နဲ့ လက်မှတ်တွေ ကုန်သွားလိုက်တာများလေ.. (၂၅) ကျပ်တန်း ဆို ၆စောင်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ တချို့ကောင်မလေးများဆို ဖိုးစိန် လက်မှတ်ရောင်းနေတာ သတင်းရရချင်း အပြေးအလွှား လာဝယ်တာတောင် အလယ်တန်းမရလို့ စိတ်ကောက် ခြေဆောက်ပြီး မျက်စောင်းလေးထိုး သွားလူဆိုး ဆိုပြီး ရတဲ့ လက်မှတ်ကို ယူသွားကြရတာ။ စာဖတ်သူများ ဒီစာဖတ်ရင်း ဟယ် မကျန်တော့ဘူးလား ဆိုပြီး စိတ်မပူပါနဲ့။ ဖိုးစိန် လက်မှတ်တွေ ရသအလင်းအဖွဲ့သားတွေ မသိအောင် (၁၅) ကျပ်တန်းက နေရာကောင်းတွေ (၂၀) တန်းက နေရာကောင်းတွေ ချန်ထားပေးပါတယ်။ အပြေးလာဝယ်ကြပါဦး။ :P
ဒီလို လက်မလည်အောင် လက်မှတ်တွေရောင်းနေတဲ့ ကြား ကောင်မလေးတယောက် က ကိုဖိုးစိန်ရယ် ဒီပွဲလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြူးပါရစေလို့ ခခယယ တောင်းပန်တာကြောင့် ဖိုးစိန်လဲအားနာပါနာ (တကယ်တော့ အဗြူးခံချင်နေတာ ကြာပေါ့) အဗြူးခံခဲ့ပါတယ်။
"ကိုဖိုးစိန်ရေ ဒီပွဲလေးက ကိုဇာဂနာ နဲ့ မင်းထင်ကိုကို ကြီးတို့ ပွဲလေးနော်။"
"ရသအလင်းက ဒီပွဲလေးကို လုပ်ပေးတာဆို "
"ဘယ်နေ့လဲ ကိုဖိုးစိန်. အချိန်ကရော"
"လာမယ် (၂၁.၁.၂၀၁၂)၊ စနေနေ့ပါ။ အချိန်ကတော့ နေ့လည် နှစ်နာရီကနေ ညနေခြောက်နာရီပါ။ ပွားရင်ပွားသလို အချိန်နည်းနည်းကြာပါမယ်။"
"သြော်..ဟုတ်.. ကိုဇာဂနာတို့က ဘာပြမှာလဲဟင်။"
"ဟမ်... သူတို့ပြတာ ကြည့်မှာလား။"
"အဲ.. ကြည့်တော့ကြည့်ချင်တယ်. အဲလေ.. သူတို့ ပြမှာ ရုပ်ရှင်ဆိုလိုပါ။"
"ရုပ်ရှင် မပြပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းတိုတွေပါ။ လွတ်လပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ဆုရ ဇာတ်လမ်းတွေရယ်။ မင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့ အင်းသီးဒေါ့ကူမန်ထရီ ရယ်.."
"ဇာဂနာကတော့သူ့ကတုံးကိုပွတ်ပြ (အဲလေ) ဘာမှ မလုပ်ပြပါဘူး။ ဇာဂနာက သူအတွေ့အကြုံတွေ. သူ့ အတွေးအခေါ်တွေ.. သူ့အနုပညာတွေကို ရှယ်မှာပါ။ မင်းထင်ကိုကိုကြီးကတော့ သူ့အကြောင်းရယ် သူ့အနုပညာရယ် သူ့ဘ၀ရယ်ကို ပြောမှာပေါ့.။ သိချင်ရင် လက်မှတ်ဝယ်ပြီး အားပေးလိုက်ပါ."
"ဒါနဲ့ ဒီပွဲက ရတဲ့ ငွေတွေကို လှူမှာဆို.."
"ဟုတ်တယ် ဒီပွဲကရတဲ့ ငွေတွေကို သင့်တော်ပြီးလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရသအလင်း က လှူသွားမှာပါ။ ရသမျှအားလုံးကိုလဲ အလှူအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်။"
"ဒါနဲ့ ကိုဖိုးစိန်က ထူးထူးခြားခြား ဒီပွဲ အတွက် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်တယ်နော်။ ကျမဆိုလိုတာကလေ အခုဆိုရင် လက်မှတ်တွေ ရောင်းပေးတယ်ပေါ့ နေ့တိုင်းလိုလိုပေါ့။ အဲဒါ ကိုဖိုးစိန်က ဇာဂနာ တို့ မင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ရဲ့  FAN လား ဒါမှမဟုတ် ရသအလင်းကြောင့်လား။"
"အမှန်ပြောရရင်ပေါ့နော်။ ဒီလိုပေါ့နော်။ ဇာဂနာကြောင့် မင်းထင်ကိုကို ကြီးကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ဖိုးစိန်လုပ်ပေးရတယ် ဆိုတဲ့ နာမည်တလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောမကုန်အောင် ကျန်ခဲ့ချင်လို့ပေါ့နော်.။"
"အဲ..ဒီလိုဆို ရသအလင်းက ကိုဖိုးစိန် ခုလို ကူညီတာကို အသိအမှတ်အပြုတဲ့ အနေနဲ့ပေါ့နော်။ သူတို့ဘာများ အသိအမှတ်ပြုပေးလဲ သိပါရစေ။"
"ပြောရရင်ပေါ့နော်။ ရသအလင်းက အသိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့နော်။ ကိုယ့်အမတွေ အကိုတွေဆီက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် ကြားရတယ်ပေါ့နော်။ မပြောရင်လဲ ကျနော့် မလုပ်ပေးမှာ ကြောက်တော့ မပြောချင်လဲ ပြောရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ရလာဒ်က VIP ခုံတခုံ ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီခုံကလဲ ဒီပွဲရဲ့  ကြော်ငြာ ဒီဇိုင်နာ တယောက်နဲ့ တနာရီခြား တလှည့်ထိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ အဲလိုမထိုင်ချင်ရင်လဲ တယောက်ပေါ် တယောက်ထပ်ထိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။ အဲလို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။"
"ကျမလဲ မေးတာတော်တော်ရှည်နေပြီးလေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ရသအလင်းကိုယ်စား ဒီပွဲလေး အတွက် ကိုဇာဂနာတို့ အတွက် ဘာများပြောချင်ပါလဲ။"
"ကတုံးကို ကြည့်ချင်လက်မှတ်ဝယ်ပေါ့။ လက်မှတ်တွေ မြနန်းနွယ်နဲ့ ရနံ့ သစ်မှာ ရောင်းတယ်ပေါ့။ ပြီးမှ ကျနော်ကျမတို့ မသိလိုက်ရလို့ လက်မှတ်မ၀ယ်လိုက်ရပါဘူး။ ကတုံးမျက်နှာ ကြည့်ခွင့် မရလိုက်ပါဘူးဆိုပြီး ဗူးသီးလုံးလောက် မျက်ရည် ကျ နောင်တမရဖို့ ခုကတည်းက လက်မှတ်တွေ ၀ယ်ပြီး အားပေးကြဖို့ပါပဲ။ ကောင်မလေး ချောချောလေးတွေ အတွက် (၁၅)ကျပ်တန်း (၂၀)တန်း က လက်မှတ်တွေ ဖွက်ထားတယ် . ကောင်လေးချောချောတွေအတွက် အနောက်ဆုံးတန်းတွေ ချန်ထားတယ်။ သိလား.. သိလား..."
"ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့ကိုဖိုးစိန်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတခုက ကိုဖိုးစိန် ဒီတသက် မိန်းမမယူတာလား.. မိန်းမ မရတာ..."
ခွပ်.. ဖျန်း.. ဂွမ်း..
လက်မှတ်များကို အားပေးရင်း ကိုဇာဂနာတို့ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ကို ဂုဏ်ပြုကြပါလို့....
Writer Sein Lyan Time 7:33 pm
Labels: ကျွန်တော့်ဘဝလေးထဲမှာ, မျှဝေခြင်း, အမှတ်တရ
နောက်ဆုံး စာကြောင်းကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ
သွားတော့ နင်ထွက်သွားလိုက်တာ့ ဟီးး
14 January 2012 at 19:59
အမလေး အရေးအသားကောင်းလိုက်တာ ဖိုးစိန်ရယ်. ရီလိုက်ရတာ..
နောက်ဆုံးစာသား အကောင်းဆုံးပဲ. တရားရုံးရောက်လိုက်သေးလား သိချင်တယ်..
15 January 2012 at 01:28
သတင်းလေးလဲ ပေးရင်း ဟာဒယရွှင်ဆေးလဲ တိုက်ကျွေးရင်းပေါ့..
စကားမစပ် အင်တာဗျုးတဲ့ ကလေးမလေးကို ဘာလုပ်လိုက်သေးတုန်း..
ဟိုမင်းသမီးလို ပါးတွေ ဘာတွေများ.. ?
15 January 2012 at 04:49
ဟယ်.. ကဖစ ရယ် ..အံ.သြစရာ (နှာခေါင်းသံလေးနဲ. “ထွက်သွားလိုက်တော.”ပြောတဲ.မင်းသမီးလေသံနဲ.နားထောင်ပါ)
16 January 2012 at 10:53
ကိုဖိုးစိန်တို့ update ဖြစ်ချက်ကတော့...
ပွဲကို တက်ချင်စိတ်တွေတောင် ပေါက်လာရတယ်....
19 January 2012 at 11:59
သေမင်းကိုရင်ဆိုင်ခြင်း (CASE 1)
ရသအလင်းရယ်. ကတုံးရယ်.. အင်းသီးရယ်... ပြီးတော့ ကဖစရ...
Human Rights Human Dignity Film Festival 2015 Myanmar
This Year 2015, PS Film Production produced one documentary film and one short film.Both were choosing for Human Rights Human Dignity ...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ ခင်ဗျာ...။ ဒီဘဝမှာ တွေ့ကျ ဆုံကျ ရတာဟာ အရင်ဘဝတုန်းက ရေစက်လို့ ပြောကြတယ်။ အရင်ဘဝတုန်းက ဘယ်လို ရေ...